ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖိနပ် Tod ရဲ့ - အတုခွဲခြားဖို့ဘယ်လို moccasins, Sneaker, Loafer, ဖိနပ်, Sneaker, ဘဲလေးတိုက်ခန်း, ဘွတ်ဖိနပ်, ဖိနပ်, ခြေနင်း,
Tod ရဲ့ဖိနပ်နာမည်ကျော်အီတလီအမှတ်တံဆိပ်ကိုထုတ်လုပ်မယ့်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က, အားကစားနှင့်ဂန္အတွက်နှစ်ဦးစလုံးကြော့မူကွဲတင်ပြနေကြတယ်, ဒါကြောင့်မင်းသမီးကအကောင်းဆုံးသူတို့၏တစ်ဦးချင်းအရသာဖြည့်ဆည်းသောထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Tod ရဲ့ဖိနပ်
အဆင်းလှသောလိင်၏အတော်များများကအမှတ်တံဆိပ် Tod ရဲ့အမျိုးသမီးဖိနပ်စိုးရိမ်သောအရာကိုရန်, စိတ်ဝင်စားရှိပါသလဲ အီတလီကုန်သွယ်မှုအမှတ်အသား 1940 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့၎င်း၏ဖန်တီးသူသော Filippo della Valle တို့ကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များတစ်ကြိမ်မှာသူမ၏အမာခံများဖန်ဆင်းသော moccasins, နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ သူတို့က 1970 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်, သူတို့တစ်တွေအဆင်ပြေရော်ဘာတစ်ဦးတည်းသော၏အမာခံများဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့် Flash အတှကျအသုံးပွု 133 ချုပ်ရိုး။ နောက်ပိုင်းတွင်ထုတ်လုပ်ခံရဖို့စတင်ခဲ့ ဂန္မော်ဒယ်များ နှင့်ထွက်ညနေခင်းများအတွက်လတ်။
အတုခွဲခြားဖို့ကိုဘယ်လို - Tod ရဲ့ဖိနပ်?
ထိုကဲ့သို့သောစတိုင် branded ဖိနပ် Tod ၏ဝယ်ယူအဖြစ်ထွက်သယ်ဆောင်သူကိုဖက်ရှင်အမျိုးသမီးတွေ, ကမူလထုတ်ကုန်ဆည်းပူးရန်နှင့်အတုသို့ပြေးဖို့မသည်သူ၏ရွေးချယ်မှုကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ဖို့အကြံပြုသည်။ ဒါဟာအောက်ပါအချက်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့အကြံပြုသည်:
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဖိနပ် Tod ရဲ့
မိန်းမတို့အဘို့ရှိုး Tod ရဲ့ဖိနပ်၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး၌တည်၏။ ဒါကြောင့်အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များ၌ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့စတိုင်မှပိုင်ထိုက်သောသည်:
အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်, အဝါနုရောင်ရှိသောကြောင့်အစဉ်အလာအဆင်းအရောင်ကိုစဲစေနိုင်သည် pastel ။ ထိုကဲ့သို့သောလိမ္မော်ရောင်, aquamarine, ကတ္တီပါနီအဖြစ်ထွန်းတောက်ပြည့်အရောင်များ။
Tod ရဲ့ moccasins
အများဆုံးအမှတ်ရစရာမူကွဲတစ်ခုမှာ loafers Tod ရဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းအလွန်အဆင်ပြေပြေနဲ့ဝတ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေဖန်ဆင်းသောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုလျှောက်ထားခဲ့ကြပြီးကတည်းကကုမ္ပဏီ၏ထုတ်လုပ်မှုရဲ့ start နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသိအမှတ်ပြုမှုရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများအနက်အောက်ပါနေသောခေါင်းစဉ်:
လမ်းလျှောက်နေစဉ်ဿုံအများဆုံး mobility အဘို့, ခေါက်ထားတဲ့ဝါး၏ရှေ့မှောက်တွင်;
Tod ရဲ့ဖိနပ်ကဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရပေးသောချုပ်တစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်အသုံးပြုသောခမ်းနား firmware ကိုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိ၏
moccasins ၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ပြည့်နှက်အရောင်များ၏နောက်ဆုံးရာသီအမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ထိုက်သောလျှောက်လွှာ၌တည်၏။ ထိုသို့သောအနီရောင်သို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်အဖြစ်သိမ်မွေ့ထိုကဲ့သို့သောလာဗင်ဒါအဖြစ်တန်ချိန်, ဒါမှမဟုတ်တောက်ပ, မျက်စိ-ဖမ်း, ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင်းအရောင်ပေါင်းစပ်လျက်ရှိ၏
ရှေ့ moccasins ဆောင်းပါးဥပမာ, သားရေသို့မဟုတ်တရားစွဲကဲ့သို့တူညီသောပစ္စည်းကနေဖန်ဆင်းတော်ပါးလွှာလေးကိုအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမြင်း၏အရောင်ကိုက်ညီသို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးနှငျ့ဆနျ့ကငျြစေနိုင်သည်။
ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များများအတွက်အလွန်လူကြိုက်များ Tod ရဲ့အမျိုးသမီးဖိနပ်။ ထိုသူတို့အဘို့ဤလက္ခဏာများ၏ဝိသေသ:
သူတို့ကသူတို့ကိုအားကစားများအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းထဲမှာအံ့မခန်းပုံရိပ်များကိုအဘို့မသာအသုံးပြုခွင့်ပြုသည့်အလွန်ကြော့ဒီဇိုင်းအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြသည် ပေါ့ပေါ့စတိုင် ။ သင်တန်းဆရာအဝတ်, အားကစားဝတ်စုံသို့မဟုတ်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်လည်းထိုးပြီးသို့မဟုတ်အလင်းဆင်မြန်းနှင့်အတူမသာပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်;
ဂန္တစ်ဦးဇာနှင့်အတူမော်ဒယ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုမူရင်းလမ်းအတွက်လုပ်ထုတ်ကုန်ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့ထိပ်အစိုင်အခဲဖြစ်ပါသည်စဉ်အခါ, နှစ်ဖက်အပေါ်တစ်ဦးရော်ဘာ elastic INSERT နှင့်အတူဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ပိတ်ပစ်စေခြင်းငှါ, ကအံ့မခန်းသားရေသို့မဟုတ်တရားစွဲမြိတ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ;
ဖိနိပ်ကြိုးအထက်ပိုင်း၏အရောင်ကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ခြားနားဂျအတွက်လုပ်ရမည်။ အဖြူထိပ်ဖျားနဲ့အနက်ရောင်ကြိုးကိုဖြန့်ဝေ, ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပေါ်;
မိန်းကလေးများမှတ်မိလွယ်တဲ့အမှတ်ရစရာလေးတို့သည်သတ္တုသို့မဟုတ်ရွှေက hue အတွက်လုပ်တောက်ပဖိနပ်, ရှေးခယျြနိုငျကြိုက်တတ်တဲ့။
Tod ရဲ့ Loafer
ရုံးထဲမှာနေ့စဉ်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်ဘာ့ဂ်များအတွက်အမျိုးသမီးတွေကို Lofer Tod ရဲ့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကအောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများအားဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်:
အာရုံစူးစိုက်မှုတွေအများကြီးများ၏ထုတ်လုပ်မှု Laufer စျေးကြီးခြင်းနှင့်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောကွညျ့အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်စတိုင်အသှငျအပွငျမှပေးဆောင်လျက်ရှိ၏
အမြဲမလိုအပ်သောအလှဆင်ဒြပ်စင်ခြင်းမရှိဘဲသက်ဆိုင်ရာတင်းကျပ် laconic မော်ဒယ်အမြဲတည်တော်မူ၏
ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက် Tod ရဲ့အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဖိနပ်ကိုပေးအပ်သည်။ ဒါဟာမော်ဒယ်များ၏ထိုကဲ့သို့သောမူကွဲမှတ်သားစေခြင်းငှါ:
တံခါးပိတ်ထိပ်တန်းနှင့်အတူဖိနပ်, သူတို့ lacing ပါဝင်စေခြင်းငှါသို့မဟုတ် Laufer အမျိုးအစားအားဖြင့်အလှဆင်ခြင်းကို;
နွေဦးနဲ့နွေရာသီရာသီများအတွက်စုံလင်သောဖြေရှင်းချက်အမျိုးသမီးဘဲလေးကသမား Tod ရဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့ရဲ့လက္ခဏာအင်္ဂါရပ်များအကြားသတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်:
အရောင်များပေါင်းစပ်နေတဲ့အနက်ရောင်ခြေအိတ်နဲ့ပေါင်းစပ်, ဥပမာ, အဖြူရောင်မျက်နှာပြင်ပစ္စုပ္ပန်နိုင်ပါတယ်။
အားကစားဖိနပ်၏နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့အပြောင်းအလဲ Tod ရဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့သောသူတို့၏ထူးခြားသော features တွေမှတ်သားစေခြင်းငှါ:
အရောင်အမျိုးမျိုး, Sneaker အထူးသဖြင့်ရင်ခုန်စရာကြည့် pastel အရောင်များ, မှောင်မိုက်သို့မဟုတ်အလင်းနိုင်ပါတယ်;
ထရေးဒင်းမှောငျ Tod ရဲ့သာနွေရာသီထုတ်လုပ်အဆင်ပြေသက်သာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပေမယ့်ဆောင်းတွင်းမော်ဒယ်, ဥပမာ, အမျိုးသမီးရဲ့ဘွတ်ဖိနပ်။ သူတို့ကထိုကဲ့သို့ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်:
ပစ္စုပ္ပန်သို့မဟုတ် thickened အခြေစိုက်စခန်းပလက်ဖောင်းတစ်ဦးဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ဖနောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအထွဋ်ဖြစ်နိုင်သည်;
Tod ရဲ့ဖိနပ်အမျိုးအစားအားဖြင့်တစ်ဦးကိုတိုကနေကွဲပြားထွဋ်တစ် bootleg ရှိသည်နိုင် ခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ် မြင့်မားထ, ဒူးရောက်ရှိ;
သတ္တုနှင့်သားရေသို့မဟုတ်တရားစွဲပေါင်းစပ်အသုံးချရာများထုတ်လုပ်ဘို့, ထိုကဲ့သို့သောထိကပေါက်အလှဆင်အဖြစ်အားပေးတယ်။ သူတို့ကရိုးတံရဲ့ထိပ်ဒါမှမဟုတ်အောက်ခြေမှာတည်ရှိနိုင်ပါသည်။
ဆောင်းဦးရာသီ-နွေဦးရာသီတစ်ခုမရှိမဖြစ်ဖြေရှင်းချက် Tod ရဲ့အမျိုးသမီးဖိနပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းထိုသို့သောမူကွဲရှိပါတယ်:
အနိမ့်သို့မဟုတ် shafted လည်းမြင့်မား;
တစ်ဆွဲထားပစ္စုပ္ပန်မြွေဆွဲထားဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်, အခြားရွေးချယ်စရာဂျမြားကိုအလွယ်တကူဖိနပ်ဝတ်ဆင်ကူညီရန်စီဘက်မှာ elastic INSERT ဖြစ်လာလိမ့်မည်
နွေရာသီဖိနပ် Tod ရဲ့ပူပြင်းတဲ့ရာသီအတွက်မရှိမဖြစ်မည်။ ဤသည်ကိုအောက်ပါထားတဲ့အကြားကွာခြားမှုအမျိုးမျိုးအတွက်အလှဆင်ခြေနင်းသို့မဟုတ်ခြေနင်း:
အပေါ်ဖြစ်နိုင်သည် တစ်ဦးပြားချပ်ချပ်ဝါး , ထူပလက်ဖောင်းပြင်ဆင်ပြီးသုံးသို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်တည်ငြိမ်ဖနောင့်;
Ruffles နှင့်အတူ Swimsuits
"Dirty ကနေသည်" နှစ်ပေါင်း 30 အကြာ, ဘာသရုပ်ဆောင်များကို၏ဖြစ်လာသည်?
အဘယ်ကြောင့်အဝါရောင် tulips ပေး?
Marinated မှို - စာရွက်
အဘယ်ကြောင့်ကလေးတစ်ဦး bends သနည်း?
Chamomile decoction မျက်နှာ
လျှော partitions ကို
အစိမ်းရောင် Dress 2014
Tsiforal - cystitis အဘို့ပဋိဇီဝဆေး